Rochak – Page9– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
आफ्नै प्रेमीले ३२ ठाउँमा छुरा प्रहार गरेपछि….
एजेन्सी । मेलिसा डोमे आफ्ना प्रेमीले चक्कु प्रहार गर्दा मात्रै २० वर्षकी थिइन् । आफ्नै प्रेमीले ३२ ठाउँमा गरेको चक्कु प्रहार सहेर पनि उनी बाँच्न सफल भइन् । त्यतिमात्रै होइन, उनलाई बचाउने व्यक्तिसँगै प्रेममा परेर विवाह भयो । उनी कलेज पढ्दादेखि नै स्थानीय अस्पतालमा रिसेप्शनमा काम गर्थिन र उनको सपना नर्स बन्ने थियो । उनी […]
भ्रष्टाचार दिवस : यसो गरे कसो होला ?
सन् २००३ डिसेम्बर ९ अर्थात् मङ्सिर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित ग¥यो । त्यसपछि विश्वभर भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाउने लहर र रहर चल्यो । त्यो लहरमा नेपाल मण्डल पनि थपियो । त्यसपछि कहिल्यै भ्रष्टाचार नगरेका गौपरानी सन्त मनुवाहरूले बर्सैबर्स यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । सदाझैँ यस बर्स पनि हिज २४ […]
यी महिलाले यसकारण खिचिरहेकी छन् १५ वर्षदेखि लाशको फोटो
एजेन्सी । एक भारतीय फोटो ग्राफर जसले अरु फोटो ग्राफरजस्तै आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिइन् । तर उनको भाग्यले उनलाई त्यस्तो ठाउँमा लग्यो, जो हामीले सोचेका पनि हुँदैनौं । बिन्दुले पछिल्ला १५ वर्षदेखि मुर्दा अर्थात मरेका मान्छेको शबकोमात्रै फोटो खिचिरहेकी छन् । साथीको परिवारको कमजोर अवस्थालाई देखेर उनका बाबुका साथी शहुल हामिदले उनलाई आफ्नो फोटो […]